Waa tan caddaynta in usbuucii ugu horreeyay ee Apple TV + uu ahaa guul - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Waa tan caddaynta in usbuucii ugu horreeyay ee Apple TV + uu ahaa guul - BGR
Hadda oo usbuucii ugu horreeyay ee adeegga cusub ee TV-yada cusub ee Apple si rasmi ah loo bilaabay, ayaa tilmaamayaashii hore ay bilaabeen in ay muujiyaan sida taxanahii Apple TV + loo helay illaa iyo hadda - iyo, inbadan. muhiim, haddii durduriyaha cusub uu bilaabay bilow wanaagsan ama uu arkay soo ifbixintiisu siman yihiin.
Waxaan u maleynaynaa inay taasi siisay xaalada jirta, iyadoo tijaabada bilaashka ah ee maalmaha 7 ay dhamaanayso jimcaha kuwa idinka mid ah ee iska diiwaangaliyay Nofembar 1er. Maalintii la bilaabay, Apple waxay u badan tahay inuu sameeyay sidoo kale wuxuu rajeyn karaa isagoo qaadaya tillaabooyinkiisii ​​ugu horreeyay ee ka soo qaybgalka waxa loogu yeero Dagaallada Hillaaca. In kasta oo jawaabaha kulul ee naqdiyayaashu naqdiyaan, bandhigyada Apple waxay ku soo bixi lahaayeen "malaayiin" aragtiyo ah usbuuca ugu horreeya, laakiin waxaa jira xitaa sabab dheeraad ah oo loo aaminsado in furitaanka uu ahaa mid guul ah
Dadku way daawadaan (waana jeclaadaan waxay arkaan) inkasta oo dhaleeceyn loo haysto.
Waxaan horeyba dareenkeyga ugu horreeyay u ogeysiiyay mar baan fiiriyey labada nooc ee daboolida adeegga - Dadka oo dhan et Bandhigga Subaxa . Midkoodna looma tixgelin karo inuu yahay showga ugu weyn ee TV-ga ilaa maanta, haddii ay tahay waxa caqabad kuu ah sabab kasta ha noqotee. Laakiin waxaan u arkay inay yihiin madadaalo hufan. Dhibaatadu waa, si kastaba ha noqotee, in badan oo idinka mid ahi ay umuuqdaan inaad isku dareen tihiin.
Qaado afarta bandhig ee ugu waaweyn oo adeegga lagu bilaabay usbuucii hore. Labada aan soo xusay, oo lagu daray View et Dickinson . Hubi farqiga u dhexeeya waxa dhaleeceeyayaashu u arkaan iyaga iyo daawadayaasha laftooda natiijooyinka ugu dambeeyay ee Rotten Tomato ee xilliga qorista maqaalkan:
Apple waxay umuuqataa inay ku qanacsantahay natiijooyinka ilaa hada
. Plus in un Warbixinta tixraaca ilaha Apple ayaa sheegaysa in rubuc-tirka tusmada kore ee kor ku xusan uu aruuriyay "malaayiin" aragtiyo ah tan iyo markii la bilaabay aaladda. Intaa waxaa sii dheer, waxay umuuqataa in dadka intooda badan ee dhibsaday inay la tashadaan adeegga ay sii nagaadaan saacad, oo ay kujiraan wax ka badan hal dhacdo oo taxana ah.
Imtixaankii weynaa ee xigaa wuxuu bilaabmayaa, hadda waa wanaagsan yahay. Marka usbuuca tijaabada bilaashka ah (oo dad badan loo qorsheeyay Jimcaha), waxaa weli loo arkaa inta qof ee joogi doonta hadda oo qiimaha 4,99 $ / bishii uu bilaabmayo inuu hoos u dhaco. Taas oo noqon karta caqabad gaar ah in la tirtiro, marka laga soo tago in bam kale oo weyn oo ka yimid shirkad yar oo aad laga yaabo inaad maqasheen, oo loogu magac daray Disney bilaabeyso Talaadada.
Apple waxay go’aansatay inay dib u bilowdo ololaheeda maalintii
Hadana waa tilmaame kale oo muhiim u ah fal-gelinta maalinta Apple. Jaranjarada ayaa umuuqata inay sifiican usamaysay, dhanka kale waa xaqiiqda in Apple ay shaacisay kuna dhawaaqday xilli ciyaareedkeedii labaad View Dickinson et Dadka oo dhan ( Bandhigga Subaxa markii hore waxaa lagu shiday cagaaran labo xilli). Kadib, Apple ayaa bilaabi doonta adeegaya of Mr. Night Shyamalan dhamaadka bishaan, Noofembar 8, iyo banner sidoo kale waxay ku dhawaaqeen jimcihii in ay tahay [Green] gadooday ku iftiimiyay cagaaran Thriller goobta shaqada ee uu hogaaminayo Ben Stiller.
Ku saabsan muuqaalkiisa sawir-qaadeha dhabta ah ee Buzz Aldrin ee riwaayadda xayeysiinta ee ku saabsan taariikhda kale Dhamaan bini aadamka Aktarka Chris Agos wuxuu BGR u sheegay inuu siyaabo badan u dareemay "waa sida ka shaqeynta filim weyn. "
"Guud ahaan, markaad telefishanka qabato, waxaad leedahay jadwal aad u adag, waxaad leedahay miisaaniyad qof walbana wuxuu ka shaqeynayaa meelahaas," ayuu yidhi. " Maaha in la yiraahdo taasi maahan kiiska halkan, laakiin wax walba waa la sii xoojiyay. Wax kasta oo ka soo baxa wax soo saarka ka hor, faahfaahinta ku jirta jadwalka, faahfaahinta in naqshadeeyayaasha wax soosaarka ay ku darsamaan qaababka - waxay u dhowdahay inay qof uun yihiin, ha ahaadeen Sony ama Apple, wuxuu yiri: Sii waxa ay u baahan yihiin.
"Waxay la wareegeen mid ka mid ah marxaladihii dhawaaqa ugu waynaa ee Sony waxayna keeneen ton iyo tan oo dhagaxyo burbursan si ay u dhisaan dayax. Waxay dhiseen milkiilaha cabbirka nolosha ee milkiilaha dayaxa. Xitaa waxay kulahaayeen xaashiyaha nacnaca nacnaca ee ku jira gasacadaha qashinka. Waxay ahayd wax lagu farxo inay ka mid noqdaan waxyaabaha noocaas ah. "
Source source: Apple
Bisaddan madow ee xaday showgii habeenka Isniinta, kubbadda cagta wali waa socotaa - BGR